Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezahlukeneyo » Izizathu zokuba ufune iWebhusayithi yabarhwebi
Xa ukwindima yomsebenzi wesintu ngakumbi njengomthengisi, unokucinga ukuba ayifanelekanga ukuba ube newebhusayithi eyeyakho. Nangona kunjalo, kukho zonke iintlobo zeenzuzo ekwakheni nasekudaleni indawo. Apha, siza kujonga ezimbalwa zazo kwinqanaba eliphezulu leenkcukacha.
Ukutsala iTrafikhi yokukhangela
Kwihlabathi lanamhlanje, abantu abaninzi ngakumbi bafuna iimpahla kunye neenkonzo kwi-Intanethi. Ukuba awunayo iwebhusayithi, le yindlela yokuthengisa oya kuthi ekugqibeleni uphoswe kuyo. Logama nje isiza sijongeka njengobuchwephesha ngokwaneleyo kwaye sibonisa ngokucacileyo ukuba kutheni uya kuba ngumntu ofanelekileyo kulo msebenzi, kusenokwenzeka ukuba utsale umthamo ophezulu wezithuthi njengesiphumo esithe ngqo soku.
Dwelisa Ngokucacileyo Iinkonzo Zakho
Inzuzo elandelayo ephambili yokuba newebhusayithi yomrhwebi kukuba uneqonga onokuthi uludwelise ngokucacileyo zonke iinkonzo zakho. Ngamanye amaxesha, abantu abangayiyo yonke loo ngqondo-ngqondo bayidingayo ukuba ipeleke xa kuziwa ekusebenzeni kanye oko unokubanika kona. Kunokuba ucinezele lonke olu lwazi kuxwebhu oluprintiweyo olufana nekhadi leshishini, iwebhusayithi ikunika indawo eninzi yokubonisa iziqinisekiso zakho kwaye inenzuzo yokuhlaziywa njengoko kuyimfuneko xa usongeza okanye ususa iinkonzo kwirepertoire yakho.
Nika ukuzithemba kubathengi
Akukho mathandabuzo amancinci okuba iwebhusayithi inokuba sisixhobo esixabiseke kakhulu sokwandisa inqanaba lokuthemba abantu abanalo kubuchule bakho bokuwenza kakuhle umsebenzi. Kanye nokukwazi ukudwelisa zonke iinkonzo zakho kwifomathi ecacileyo njengoko besixoxile ngaphambili kwiposti yebhlog, unokubandakanya ubungqina obuthile babathengi kunye nezifundo zetyala, ezinokusebenza ukwandisa amanqanaba okuzithemba ngakumbi. Ukuba unazo naziphi na iziqinisekiso ezibonisa ukuba ufanelekile, ezi zifanelekile ukuba zibekwe kumboniso. Ukuba ngoku ufumana isiqinisekiso, unako funda ngakumbi malunga nelayisensi ye-HVAC Apha.
Kuphephe Ukushiyeka Ngasemva
Liyinyaniso elokuba abantu abaninzi ngakumbi bayabutshintsha ubomi babo kwi-Intanethi. Ngenxa yoko, iinkampani ezininzi ziye zafumana uxanduva Qhubeka. Nokuba iinkonzo ozinikezelayo zikwinqanaba elingaxhunyiwe kwi-intanethi, ukunqumla apha kusenokuphela kubaluleke kakhulu. Sathetha malunga nokuba bangaphi abantu abenza uphando kwi-intanethi, kodwa kukwakho nomthamo omkhulu wabo basebenzisa imidiya yoluntu kwaye baphenjelelwa ngokwemvelo ngale ndlela.
Onke amashishini adinga iwebhusayithi kwihlabathi lanamhlanje, kwaye oku ngokuqinisekileyo kubandakanya iinkampani zabathengisi ukuze bakwazi ukwakha uphawu, bafumane isiseko somthengi wendawo kwaye babonise ubungqina. Ezi zezinye zezizathu zokuba kutheni oku kunjalo, kwaye isiphumo soguqulo esinokubakho kwishishini lakho sinokuphela ngokulula sibalulekile kwaye simele inyathelo elikhulu ukuya phezulu.